Super Guide si loo fahmo loona hagaajiyo Wi-Fi gurigaaga. | Wararka IPhone
Super Guide si aad u fahamto iskuxirkaaga Wi-Fi oo aad ugu dhigto heerka iPhone-kaaga, Mac iyo aaladaha kale.
Juan Colilla | | Wararka IPhone, Alaabada Apple, Casharrada iyo buugaagta, dhowr
Aynu qirno, inaad ku nooshahay magaalo weyn mooyee ama meel cadaalad ah oo dadku ku badan yihiin, waxay u badan tahay inaadan ku raaxeysanayn fiber optics-ka gurigaaga, xitaa haddii aad ku raaxeysato, waxa ay u sii badan tahay ayaa ah routerka uu bixiyo hawlwadeenku kuma xirna shabakadaada, aad uga yar qalabkaaga Apple.
Qalabka IOS iyo Mac waxay hagaajinayaan jiilkooda isku xidhka jiilba jiilka ka dambeeya, sidaa darteedna tan iyo jiilkii ugu dambeeyay ee ay u hoggaansamaan heerarka ugu dambeeya ee isku xirka wirelessWaxaan si gaar ah uga hadlaynaa isku xirka Wi-Fi iyo 5GHz band oo leh heerka 802.11ac.
Sida aan ku aragno sharraxaaddan, laga bilaabo iPhone 6 iyo 6 Plus, heerka ugu casrisan ayaa la bilaabay in la taageero 802.11ac, si kastaba ha ahaatee tani waxay leedahay khiyaano waana in aysan aheyn ilaa iPhone 6s iyo 6s Plus (iyo iPads ka Air 2) halka ay ku soo bandhigtay Teknolojiyada MIMO (Wax soo saar badan oo Tiro badan) oo si weyn u wanaajinaysa xawaaraha ay wareejinta xogta ku gaari karto iyadoo leh anteenooyin kala duwan si ay isugu diraan una helaan baakado isku mar ah.
Guud ahaan, illaa aad ku nooshahay aag sida kuwa aan horay u soo sheegay, waxay u badan tahay in router-kaaga uusan xitaa ka sii deynin band 5GHz, tani waxay sidoo kale muujineysaa inaysan la jaan qaadi doonin heerka 802.11ac, sidaa darteedna aad u badan ma awoodi doontid inaad ku raaxaysatid xawaaraha ugu sarreeya ee suurtogalka ah ee wirelessTaasi waa sababta maqaalkan aan ugu sharaxeyno tiknoolojiyad kasta dhibic iyo qodobbada ay tahay inaad tixgeliso markaad iibsaneyso router
1 Maxay taasi uga dhigan tahay labada qaybood? 2'4Ghz ama 5GHz
1.1 Soo noqnoqoshada 2GHz
1.2 5GHz inta jeer
2 Hadda waxay ku jirtaa heerka Wi-Fi, 802.11 waa maxay?
3 Beamforming, router si loola dagaallamo
3.1 Beamforming maaha qof walba
3.2 Faa'iidooyinka beamforming
3.3 Astaamaha Beamforming
4 NAS (Shabakad Ku Xidhan Shabakad)
5 Smart QoS, laga yaabee muuqaalka ugu qiimaha badan
5.1 Mudnaanshaha taraafikada:
5.2 Dammaanad qaadka ugu yar ee ballaadhinta:
6 Gabagabadii ugu dambeysay
7 Router lagu taliyay
Maxay taasi uga dhigan tahay labada qaybood? 2'4Ghz ama 5GHz
Gabi ahaanba waa caadi in tiro iyo xarfo badan la isku daray, labadaba 802.11 a / b / g / n / ac, aad u badan MIMO iyo wax badan GHz Aynu ku dambayno jahwareer kuwa fahmayna kuwa ugu yar way jahwareersan yihiin, laakiin waxaas oo dhami way ka fudud yihiin sida ay umuuqato, waxaan isku dayi doonaa inaan ku sharaxo qaab fudud.
Kahor intaanan bilaabin ka hadalka kooxaha la heli karo iyo astaamaha mid kasta, waa inaan ogaanno waxa ay yihiin kooxaha Wi-Fi. The Kooxaha Wi-Fi Waa mowjadaha uu dirayuhu ku sii daayo hirarka Wi-Fi ee uu qaataha ruuxa qaata, si loogu xidho koox koox loo samaynayo, soo diraha iyo kan wax soo dirayaba waa inay la jaan qaadaan kooxda la doonayo.
Waxay ahayd inay kuugu muuqatay sida Shiineys oo kale, sax? Aan soo qaadano tusaale; Waxaa la dhihi karaa xogta ama baakadaha xogta (macluumaadka ku wareegaya mowjadahaan, iyada oo loo marayo Wi-Fi-keena) waxay la mid yihiin diyaaradaha, iyo in kooxaha ama mowjadaha kala duwan ay la mid yihiin dhererka duulimaadka.
Markaa aan dhahno kooxda 2GHz waa dherer duulimaad oo dhulka u dhow kan 4GHz-na ka sareeyaa, maxay tan macnaheedu tahay? Diyaarado badan oo duug ah ayaan awood u lahayn inay ku duulaan dherer cayiman (aalado badan oo duug ah oo aan la jaan qaadi karin 5GHz band) marka waa inay hoos u duulaan haddii ay doonayaan inay guuraan, tan waxaa lagu dhex daray xaqiiqda ah in shirkado badan oo duulimaadyo ah ay leeyihiin diyaarado duug ah. (guryo badan iyo shirkado badan ayaa leh router ka shaqeeya kaliya 5GHz band), tani waxay ka dhigeysaa goobta duulimaadka hoose inay ku buuxsamaan diyaaradaha oo ay adag tahay in la duulo shilal la'aan, hase yeeshe, diyaarado casri ah ayaa gaari kara meel sare (kan ugu casrisan Aaladuhu waxay la jaan qaadi karaan 2GHz band) waxaana jira duulimaadyo aad u tiro yar oo halkaas u duulaya, tani waxay muujineysaa inay jiraan shilal badan oo ka yar, waa hawad aan la qancin oo ay diyaaraduhu ku leeyihiin booskooda oo aysan ahayn inay is dhibayaan.
Waxaa laga yaabaa inaad xoogaa ku wareersan tahay isbarbardhiga diyaaradaha, si aad u aragto haddii intaas ka dib aragtida dhabta ahi ay kuugu fududahay inaad dheefshiido; Inta badan jiheeyeyaashu ma ahan kuwo casri ah oo ku filan in lagu sii daayo kooxda 5GHz, tani waxay muujineysaa in baloogga ay jiri karto aamusnaan (buunbuunin la'aan) 30 router oo soo daaya hirarka Wi-Fi inta jeer ee 2GHz iyadoo nasiib wanaag 4 ka mid ah ay baahin doonaan qaybta 3GHz (illaa aad ku nooshahay magaalo weyn oo imaatinkeeda fiber ay qasab ka dhigtay aasaasidda router casri ah), maxaa dhacaya markaa? Hagaag, 30-kan Wi-Fi emitters waxay sababi doonaan qanjir ka dhexjira kooxda, tan waxaa lagu xaqiijin karaa iyadoo lagu sameeyo skaanka kombuyuutarka laptop-ka ama taleefanka gacanta oo la arko sida aan u haysanno liistada dhammaadka shabakadaha Wi-Fi ee farahayaga, maadaama ay jiraan qaar badan oo ka mid ah shabakadahan ayaa farageliya midba midka kale oo keenaya faragelin iyo, xaalado badan, luminta calaamadaha isdaba jooga ah (xasillooni darrada shabakadda).
Sababtaas awgeed ayaa kooxda 5GHz ay ​​aad u qiimo badan tahay, waa koox hadda leh wax yar oo lagu soo kordhiyay, laakiin waa in router-yada aysan ahayn kuwa kaliya ee ka sii daayay bandiga 2GHz, taleefannada gacanta iyo xitaa microwaves emit calaamadaha on inta jeer, tani waxay ka dhigan tahay tusaale ahaan haddii aad dhaqaajiso microwave, aaladaha u dhow waxay yeelan doonaan dhibaato weyn in la gaaro xiriir xasiloon oo la router ah, iyo tan in kasta oo xaqiiqda ah in router ku baahin karaa 11 kala duwan wadiiqooyinka kooxda 2GHz (waxaa la dhihi karaa inay yihiin meelo kala duwan oo hawada gudaheeda ah), iyadoo taasi ay jirto iyo in routerkeennu si toos ah u beddelayo kanaallada si looga fogaado faragelinta, tani ma noqon doonto routerka keliya ee sameeya, sidaa darteed waxaan ku sii wadaynaa iyaga waxaana nagu hareeraysan aalado ka baxa bandhiga 4GHz.
Dhinaca kale, kooxdii 5GHz ma aha oo kaliya ayaa leh xasilloonida weyn faragelin yar, laakiin taageerooyin xawaare sare wareejinta xogta, halka kooxda 2GHz ay ​​taageerto ugu badnaan 4Mbps heerkeeda ugu casrisan, 450GHz band waxay awood u leedahay inay gaarto xawaare xawaare ah 5Mbps, in kabadan laba jibaar, shaki la’aan inay tahay horumar muuqda marka la barbardhigo kooxda kale ee leh faa iidada oo aan haysan dhibaatooyinka faragelinta microwave ama aaladaha kale.
Si kastaba ha noqotee wax walba maahan dahab, kooxda 5GHz waxay leedahay kala duwanaansho aad u gaaban oo ay dhib weyn ku tahay in la dhex galo caqabadaha jireed sida derbiga, waxaa la dhihi karaa isla duruufahaas oo kale, mowjad ka soo baxeysa kooxda 5GHz ayaa leh 1/3 baaxadda mid ka mid ah la sii daayay qeybta 2GHz, taasi waa, in waxa ugu badan ee maalmahan lagu taliyaa waa in la isticmaalo aalado la jaan qaadi kara «Dual Band».
Sidaa darteed, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka koox waliba waa sida soo socota:
Soo noqnoqoshada 2GHz
Kala duwanaansho wanaagsan.
La jaan qaadi kara aqlabiyadda qalabyada duugga ah iyo kuwa cusub.
Dhexgalka wanaagsan ee caqabadaha.
Anteenooyinkoodu badanaa way jaban yihiin.
Faragalin fara badan, xitaa qalabka guryaha.
Xawaaraha gudbinta xogta oo gaabis ah.
5GHz inta jeer
Xawaaraha wareejinta sare.
Faragelin yar, oo aysan saameyn qalabka korontada.
Wax yar oo ka mid ahaanshaha caqabadaha jireed.
Anteenooyinkoodu badanaa way ka qaalisan yihiin.
La jaanqaadida aaladaha cusub (tusaale ahaan, laga bilaabo iPhone 5 ama ka sareeya).
Hadda waxay ku jirtaa heerka Wi-Fi, 802.11 waa maxay?
Halkan waxaan ku haynaa heerar kala duwan, mid walbana ka cusub kii hore, oo leh faa'iidooyinkiisa iyo faa'iido darrooyinkiisa, qaar cusubi gadaal ayey iswaafajin karaan Qalab loogu talagalay kuwa waayeelka ah, qaarkood waxay isticmaalaan band 2GHz, qaarna 4GHz band oo xitaa waxaa jira kuwa isticmaala labadaba (kan dambe ayaa loo yaqaan Dual Band), wadar ahaan waa 5, dhammaantood waxaan ku eegi doonnaa siday u kala horreeyaan , laga bilaabo kan ugu da'da weyn ilaa kan ugu casrisan.
Sanadkii 1997, Machadka injineernimada korantada iyo elektaroniga (IEEE ee ingiriiska) wuxuu sameeyay heerka koowaad ee tiknoolajiyadda Wi-Fi, tani waxay heshay magaca 802.11 iyadoo loo tixraacayo kooxdii kormeertay mashruuca, nasiib darose, heerkaan oo aad u da 'weyn ayaa kaliya helay xawaaraha gudbinta xogta ee ah 2 Mbps, ama si ka sii cad oo aad dhamaantiin u fahantaan, waxay u dhigantaa 0MB / s, maadaama 25 Mbps ay u dhigantaa 1MB / s, dhamaan siyaabaha aan u adeegsan doono habkan ugu dambeeya u cabbira si ay kuugu fududaato inaad la qabsato fikradda.
Sanadkii 1999 IEEE waxay balaarisay jaangooyada mid cusub oo la yiraahdo 802.11b, heerkaan cusub wuxuu adeegsaday 2GHz band aan sharciyeysneyn isagoo ku guuleystay xawaaraha ugu badan ee 4MB / s, wax la mid ah inta badan isku xirka maanta. Maalintii.
Heerkani wuxuu muujinayaa hoos u dhigista kharashyada marka la isticmaalayo kooxda aan sharciyeysnayn ee 2'4GHz, si kastaba ha ahaatee tani waxay keenaysaa faragalinta taleefannada gacanta, qalabka microwave ama qalab kale oo kasta oo isticmaalaya inta jeer, faragelintaas waxaa looga hortegi karaa iyadoo la dhigayo calaamadda Wi-Fi soo saarida barta istiraatiijiyadeed iyo meel sare.
Caqabadaha ayaa si fudud looga fogaan karaa iyadoo la dhigo router-ka si fiican.
Xawaaraha ugu hooseeya.
Qalabka guryaha ayaa faragalin kara astaamaha marka la isticmaalayo faashadda 2GHz.
Heerkani waxaa la abuuray isla waqtigaas oo ah 802.11b, waxay ahayd markii ugu horreysay ee la adeegsado kooxda 5GHz ee nidaamsan, hase yeeshe taasi waxay ku lug leedahay kharash aad u sarreeya oo aan ka dhigin mid caan ah 802.11b.
802.11a waxaa loo sii daayay bay'ad ganacsi, xawaareheeda balaaran wuxuu gaarayaa ilaa 6MB / s, xawaare aad u fara badan, in kasta oo ay taasi ahayd 75b oo ku dambaysay xukunka guryaheena.
Xawaaraha gudbinta xogta sare (6MB / s ama waxa la mid ah, 75 Mbps).
Maaddaama kooxda 5GHz ay ​​tahay koox nidaamsan, ayaa laga ilaaliyaa inay buuxiso qalab kale oo aan la oggolaan.
Dhibaato weyn oo ka mid ah caqabadaha dhexgalka.
Sanadihii 2002 iyo 2003 heer cusub oo la yiraahdo 802.11g ayaa la sii daayay, wuxuu u yimid in la isu geeyo kan ugu fiican 802.11b iyo 802.11a, 802.11g wuxuu taageeraa bandwidth ilaa 6MB / s wuxuuna adeegsadaa inta jeer ee 75 '2GHz si loo gaaro kala duwanaansho ballaaran iyo soo dhex gelida caqabadaha, heerkani sidoo kale waa mid gadaal la jaan qaadaya 4b, tani waxay muujineysaa in aaladaha loogu talagalay heerkaas hore ay la jaan qaadi karaan midka cusub iyadoon loo baahnayn in wax laga beddelo.
Isticmaalka baandada 2GHz waxay bixisaa baaxad weyn iyo dhex gal.
Xawaare sare oo gaaraya 6MB / s.
Waafaqid dib u 802.11b.
Qiimaha ka sareeya 802.11b.
Farogelinta ay ugu wacan tahay buuxinta kooxda.
Faragelinta qalabka korontada ama aaladaha kale.
Heerka 802.11n waxaa sidoo kale loo yaqaan magaca "Wireless N", tani waxay u timid inay hagaajiso xawaaraha ama xawaaraha xawaare ee kuwii ka horeeyay iyada oo lagu darayo tiknoolajiyada MIMO (Tiro badan oo Tiro badan oo Ingiriis ah), tikniyoolajiyaddan waxay ka faa'iideysaneysaa in ka badan hal antenna ilaa dir oo soo qaado baakadaha xogta isku mar, sidaasna looga fogaado luminta qaarna ugu dambeyntii hagaajinta xoogga shabakadda.
Sannadkii 2009 waxaa la go'aamiyay in heerkani uu gaari karo xawaare gudbinta oo dhan 37MB / s. Heerkani waa mid gadaal la jaan qaadaya 5b wuxuuna adeegsadaa kooxda 802.11GHz oo aan sharciyeysnayn.
Xawaare aad u sarreeya.
Xoojinta sare ee isticmaalka anteenooyin badan.
Qiimaha ayaa ka sareeya heerarkii hore.
Shabakadaha ku saleysan 802.11g iyo 802.11b waxay faragalin karaan calaamaddooda.
Qalabka ama aaladaha kale ee isticmaala 2GHz band waxay sababi karaan faragelin.
Tani waa heerka ugu cusub, waxay adeegsaneysaa iskudhaf Dual Band iyo teknolojiyad MIMO ah, waxay gaaraysaa xawaare dhan 162'5MB / s oo 5GHz band ah iyo 56'25MB / s qeybta 2'4GHz, gadaal ayey u dhigantaa 802.11b, heerarka g iyo n.
La jaanqaadka gadaal ee heerarka hore wuxuu u oggolaanayaa aalado duug ah oo adeegsan kara (iyadoon ku raaxeysanayn dhammaan faa'iidooyinkiisa) heerkan.
Xawaaraha ugu fiican ama xawaaraha gudbinta xogta ee labada koox.
Adeegsiga tikniyoolajiyadda MIMO waxay u oggolaaneysaa xoojinta shabakadda weyn.
Waxay leedahay isku darka xawaaraha, kala duwanaanta wanaagsan iyo darajooyinka kala geddisan ee soo dhexgalka caqabadaha iyo faragelinta iyadoo ku xiran hadba kooxda aan ku xirmayno (waxaa jira 2 Wi-Fi oo kala gooni ah, midba koox walba).
Dual Band MIMO waxay muujineysaa qiime sare.
Qeybta 2GHz wali waxaa saameynaya astaamaha faragelinta.
Qeybta 5GHz weli ma lahan xaddi u dhigma kan 2GHz.
Beamforming, router si loola dagaallamo
El abuurista Waa tikniyoolajiyad asal ahaan u oggolaanaysa isticmaalka anteenooyinka Wi-Fi-ka waxtarka badan. Ruter-yada leh beamforming waxay awoodi doonaan inay ogaadaan meesha qalabka ku xiran shabakadooda Wi-Fi iyo diiradda saar calaamadda iyaga halkii laga sii deyn lahaa mowjad jihada omni-ka ah oo laga sugayo inay gaarto macaamilka.
Si aan fikrad kuugu siiyo, anteeno aan lahayn wax beamforming ah waxay la mid noqon kartaa guluubka nalka iyo mid leh lesaar, marka nalka nalka uu u shido si isku mid ah wax kasta oo ku hareeraysan, wuxuu siidaayaa iftiinka dhan walba, leysarka, hase yeeshe, wuxuu xooga saaraa iftiinka iftiinka si sax ah dhanka barta aan higsaneyno.
Beamforming maaha qof walba
Tiknoolajiyaddan waxaa lagu soo saaray heerka 802.11n, hase yeeshe markii ay IEE sameysay, ma aysan cadeynin sida adeegsiga tikniyoolajiyaddan loogu dabaqayo heerkaan, iyadoo taasi ay keentay in aalado badan (router-ka iyo kuwa wax qaata) ay ka soo muuqdeen suuqa. iyadoo la adeegsanayo habab kala duwan oo loogu talagalay isticmaalka beamforming, cilladda ayaa ah in qaababkani aysan isla shaqeynayn, tan darteed waxay ahayd inaad haysato router iyo qalab hirgeliya isla habka beamforming-ka si uu u noqdo mid is waafajin kara, haddii kale noqo sida shabakad Wi-Fi caadi ah.
Nasiib wanaag, IEE kuma aysan sameynin qalad isku mid ah heerka cusub ee 802.11ac, hadda waxaa jira tilmaamo loo dajiyay inay raacaan soo saarayaasha doonaya inay ku hirgeliyaan tikniyoolajiyadan qalabkooda, sidan, aaladaha oo dhami way iswada jaan qaadi karaan adoo adeegsanaya isla habka beamforming.
Thanks to beamforming, waxaan heleynaa calaamadeena inaan diirada saarno qalabka ama aaladaha isticmaalaya, sidaas awgeedna yareynaya daahitaanka iyo kordhinta isku xirnaanta.
Waxaan aragnay faa'iidooyinka tikniyoolajiyaddan iyo asal ahaan waxa ay tahay, laakiin waxaa jira qarsoodi badan oo ka dambeeya, tusaale ahaan, maahan dhammaan aaladaha adeegsada heerka 802.11ac inay la jaan qaadi karaan beamforming, guud ahaan waa router waxqabad sare leh ka faa'iideysan kara tikniyoolajiyaddan.
Dhammaan qaatayaashu si buuxda ugama faa'iidi karaan sidoo kale, tan waa inuu lahaadaa qalab Wi-Fi ah oo taageera MIMOTusaale ahaan, iPhone 6 wuxuu kaheli karaa aalad ka socota router leh beamforming ilaa heerka 802.11ac (iPhone 6 ama wixii ka sareeya ayaa la jaan qaadaya heerkaan), sikastaba iphone 6 ma tilmaami karo router-ka, waa inuu soo diraa baakado meel walba u maraya, tani way dhacdaa maxaa yeelay iPhone 6 ma awoodo inuu "beamforming", sikastaba iPhone 6s ama ka sareeya waa, iPhone-kan iyo iPad-ka Air 2 waxay wataan qalab Wi-Fi ah oo wata tiknoolajiyadda MIMO oo kuu oggolaaneysa inaad ka faa'iideysato dhammaan faa'iidooyinka tikniyoolajiyadan.
NAS (Shabakad Ku Xidhan Shabakad)
Qaar ka mid ah router-yada waxaa ku jira dekedda USB, kuwa kale xitaa waxay leeyihiin darawal adag gudaha, router-yadaani waxay taageeraan ama ay ku jiraan shaqeynta NAS, tani waxay muujineysaa inaad isku xiri karto qalabka keydinta oo ka faa'iideysi fog.
Tusaale ahaan, qaar ka mid ah router-yada waxqabadka sare leh waxaa ka mid ah disk adag oo gudaha ah waxayna kuu oggolaaneysaa inaad sameyso waxyaabo illaa iyo hadda cidina aysan ka fikirin router, sida:
Mashiinka Waqtiga: Iyada oo leh Mac, waad isku habeyn kartaa shabakad adag si aad ugu shaqeyso sidii Mashiinka Waqtiga, sidaas darteedna u suurtagelinaysa Mac inuu nuqulo nuqul ah oo iskufilan ka sameysto kumbuyuutarkan adag si otomaatig ah iyo fiilooyin la'aan
Kaydinta fog: Waxaan u isticmaali karnaa darawalkan adag sidii keyd fog, dabcan akhriska / qorista xawaaraha waxaa ku koobnaan doona oo kaliya kuwa qalabka keydinta laakiin sidoo kale xawaaraha Wi-Fi ama shabakada fiilooyinka leh, si kastaba ha noqotee waxaan ku wareejin karnaa feylasha sida sawirada ama fiidiyowyo shabakaddan adag oo ka fiiri qalab kasta oo kale (sida taleefannada casriga ah ama telefishanka) adigoon soo dejisan.
Maamulaha daadka Qaar ka mid ah router-yada xitaa waxay u oggolaadaan inay yeeshaan maamule durdur leh, tani waa kiiska Xiaomi Smart Router 2 taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad daadad u dirto router-ka iyo inay ku soo dejiso qalabkaaga keydinta adigoon haysan qalab kale oo socda.
FTP server: Qalabkan keydinta waxaa loo qaabeyn karaa in la heli karo xitaa haduu guriga ka maqan yahay, ilaa iyo inta routerkeenu uu leeyahay xiriir internet, aaladda wax lagu keydiyo ayaa sidoo kale heysata, sidaa darteed waxaan heli karnaa adeeg kaydin xawaare sare leh oo internetka ah (oo lagu go'aaminayo tayada isku xirnaanta qandaraaska) qiimaha aan dooneyno (oo ay go'aamisay booska keydinta iyo qiimaha qalabka) iyo booska aan rabno.
Smart QoS, laga yaabee muuqaalka ugu qiimaha badan
QoS waa soo gaabinta ereyga Tayada Adeegga (Tayada adeegga Isbaanishka), tani waa muuqaal aad muhiim ugu ah guryaha ay kujiraan astaamo isticmaaleyaal kaladuwan.
Tusaale ahaan, haddii aad guriga ku leedahay xubin qoys oo ku ciyaaraya ciyaaraha fiidiyowga ee khadka tooska ah, mid kale oo sida caadiga ah daawada inbadan oo adeegyo fiidiyoow ah sida YouTube ama Netflix iyo / ama mid kale oo adeegsada barnaamijyada daadka, waxaad ku noolaan doontaa xaaladda guryo badan oo isku xirku ku abuuro dhibaatooyin u dhexeeya dadka isticmaala.
Wadahadal badan ayaa ku dhamaan kara ka mid noqoshada qalab ay ku jiraan Smart QoS, shaqadani waxay qaadi kartaa tallaabooyin arrintan la xiriira sida kala-mudnaanta taraafikada iyo / ama dammaanad qaadka ugu yar ee ballaadhinta, si aad si fiican ugu fahanto waan kuu sharixi doonaa:
Si isticmaale ayaa ciyaaraya ciyaar khadka tooska ah sidee u noqon kartaa League of Legends iyo mid kale oo ka daawanaya fiidiyowyada YouTube ama NetflixLabadan isticmaale waxay aasaasayaan taraafikada router-ka, haddii ay dhacdo in aan lahayn QoS router-kan wuxuu u diri doonaa xogta lagama maarmaanka u ah internetka marka uu yimaado, iyada oo aan la siinin mudnaanta mudnaanta. Si kastaba ha noqotee, kuwani waa laba waxqabadyo kala duwan, ciyaarta khadka tooska ah waxay u baahan tahay daahitaanno hooseeya, tani macnaheedu waa in xirmooyinka ay u baahan yihiin inay si dhakhso leh ugu yimaadaan serverka isla markaana lagu soo celiyo isla xawaare isku mid ah, ciyaar ka tirsan League of Legends ciyaarta oo leh 1 saac saacaddii. waxay ku lug yeelan kartaa kharashka kaliya 70MB, hase yeeshe YouTube ama Netflix fiidiyowyada qulqulaya uma baahna latency isku mid ah laakiin xawaareynta iyo xawaaraha soo dejinta, fiidiyowyadan tayada leh ee HD waxay soo saari karaan boqollaal MB ama xitaa 1 ama 2 GB isticmaalka saacad gudaheeda, waa laba adeegsi ee shabakadda u baahan baahiyo kala duwan.
Iyada oo mudnaanta taraafikada ee router leh Smart QoS, routerku wuu ogyahay dhaqdhaqaaqa mid kasta oo ka mid ah iyo waxa uu u baahan yahay, sidaas awgeed wuxuu hubinayaa daahitaanka ugu yar ee isticmaalaha ciyaara (taas oo u oggolaan doonta isaga inuu xakameeyo astaamahiisa waqtiga dhabta ah oo aan dib u dhac lahayn ) iyo bandwidth ku filan iyo xawaaraha soo dejinta ee isticmaalaha daawanaya fiidiyowga qulqulaya (oo ku raaxeysan doona fiidiyoow aan kala go 'lahayn iyo sidoo kale ma dhibayo isticmaaleha ugu horreeya).
Dammaanad qaadka ugu yar ee ballaadhinta:
Xaaladahan waxay ku dhici karaan noocyada kale ee isticmaaleyaasha, sida isticmaalaha daawanaya fiidiyowyada qulqulaya iyo mid kale oo soo dejinaya daadka, isticmaalaha ugu horreeya (haddii uusan lahayn router leh Smart QoS) wuxuu arki doonaa sida fiidiyowyadoodu aysan si fiican u buuxin iyo Dhibaato joogsi ah maxaa yeelay isticmaalaha labaad wuxuu isticmaalayaa dhammaan balastarka markii uu dajinayo daadka, tani waxay u dhigantaa waddo, wadada ballaaran, gawaarida badan ayaa awood u yeelan doona inay isla mar maraan (bandwidth), hase yeeshe la'aanteed Smart QoS Qofna ma yiraahdo baabuurku wuu mari karaa meesha, waxay u egtahay waddo weyn oo aan sharciyeysnayn.
Waad ku mahadsan tahay Smart QoS iyo dammaanad qaadkeeda, routerka shaqadan leh wuxuu u qoondeyn doonaa ugu yaraan xawaare yar adeegsade kasta, isticmaalehani wuxuu yeelan doonaa qayb ka mid ah waddada oo la ilaaliyo si baabuurtooda (xirmooyinka) ay uga gudbaan iyadoon isticmaale kale u adeegsan karin wadiiqooyinka, sidan ayaa lagu hubiyaa in qof kastaa mari karo oo aanu cidna ku soo xadgudbin haadka mid kale.
Tilmaamahan waxaad diyaar u noqon doontaa inaad ku falanqeyso xaalada gurigaaga ama goobtaada shaqada, ka fikir isku xirnaanta aad qandaraaska qaadatay, hubi in routerkaagu uu yahay tan tan iyo xitaa aaladahaaga (xitaa haddii aadan haysan router optic wanaagsan si weyn u wanaajiya isku xirkaaga adoo sifiican u fulinaya howlaha sida qulqulka AirPlay, maaraynta Torrents downloads, YouTube iyo kulamada ciyaarta ee internetka si qaarkood aysan u faragalin kuwa kale ama xitaa u hagaajiyaan gaadhista shabakadaada aagaga guriga kuwa horey u soo shaac baxay. ).
Faahfaahin muhiim ah sidoo kale xulashada router waxay noqon kartaa processor iyo RAM rakibay, Waan ogahay inay taasi u muuqan karto mid buunbuunin ah laakiin processor-ka ugu wanaagsan ee routerku leeyahay, wuxuu sifiican u awood u yeelanayaa inuu go'aan ka gaaro taraafikada dhex marta, iyo inta RAM-ka ah ee ay leedahay, xirmooyin badan oo ay keydin karto si ay awood ugu yeelato midba midka kale udirro adigoon isticmaaleyaashu arkin xiriirkooda oo gaabis ah.
Arrintu waxay noqon kartaa mid cakiran, hase yeeshee ma ahan, furaha ayaa ah in la raadiyo router tayo leh qiimo wanaagsan, looma baahna inaad iibsato kombiyuutar supercomter ah oo maareeya isku xirka gurigaaga, si kastaba ha noqotee router xun ayaa si weyn uga sii dari kara khibradaada isticmaale.
Internetka waxaad ka heli kartaa router wanaagsan oo la jaan qaadi kara heerarka ugu dambeeya ee isku xirka wireless, leh NAS ama la jaan qaadaya oo xitaa leh anteenooyin badan iyo shaqada Smart QoS, dhibaatadu waxay tahay in router badan oo qaabkani u muuqdo inuu yahay adag tahay in la rakiboQaarkood xitaa waxay leeyihiin anteenooyin cajaa'ib leh oo aan xitaa kalabar cabbirka waxa caaggu ka dhigayo ay ku arkeen (iyaga oo furaya anteenooyin badan ayaa dhab ahaantii muujiyay inay ka yar yihiin 50% waxa ay qabsadaan).
Router lagu taliyay
Qaar router-ka oo aan shakhsi ahaan kugula taliyo Waxay yihiin:
Xiaomi Mi Wifi 2 - € 30 - kan ugu raqiisan NAS ee la jaan qaadaya 802.11ac MIMO Wi-Fi router aad ka heli karto, kuna dhiirrigelinayo Apple's Magic Trackpad, ayaa ku farxi doona xiriir kasta oo guri. Dhamaan router-yada Xiaomi waxaa ku jira codsi loogu talagalay macruufka iyo Android iyo isdhexgalka fudud.
AirPort Express - € 109 - router-ka ugu jaban Apple, in kasta oo uu leeyahay shaqooyin ka dhacsan marka loo eego kuwa Xiamo Mi Wifi 2, waxaa jira dad aan diyaar u ahayn inay iibsadaan noocyo sida Xiaomi, markan waxaan leenahay router la jaan qaadaya heerka 802.11n, oo ku filan guryo badan, oo aan lahayn waafaqid NAS.
Xiaomi Smart Router 1 (1TB) - € 124 - Jiilkii ugu horreeyay ee loo yaqaan 'Xiaomi' router-ka horumarsan, kan ugu horreeya liiska oo ay ku jiraan NAS asal ahaan, wuxuu leeyahay meel hoose oo hoose si uu ugu xiro darawal adag (oo ay ku jiraan midka 1TB) wuxuuna la jaan qaadayaa beamforming, heerka 802.11ac iyo SmartQoS.
Xiaomi Smart Router 2 (1TB) - € 150 - Waa ka horumarsan yahay kii hore (kan ugu fiican fikradayda) iyo 1TB oo lagu dhisay NAS, router-kan wuxuu la jaan qaadayaa heerka 802.11ac, teknoolojiyada beamforming, maamulaha daadka, Smart QoS, keydka otomaatiga ah iyo waxyaabo kaloo badan. ...
AirPort Extreme - € 219 - Apple-ka ugu horumarsan ee loo yaqaan 'NAS router la jaan qaada (oo aan lagu darin), oo la jaan qaada heerka 802.11ac, beamforming, wuxuu leeyahay wadarta 6 anteenooyin ah nidaamka 3X3 MIMO (3 loogu talagalay 2GHz iyo 4 loogu talagalay 3GHz), USB 5 dekedda iyo codsiga casriga ah.
AirPort Waqtiga Xad dhaafka ah (2TB) - € 329 - nuxur ahaan, waa AirPort Extreme oo leh 2TB adag oo adag oo lagu rakibay kaas oo kuu oggolaanaya inaad sameysid Mashiinka Waqtiga maxaliga ah adoo adeegsanaya shabakaddaada Wi-Fi, si aad si fudud oo toos ah oo aan xadhig lahayn u sameysan karto Mac-kaaga. .
Xiaomi Smart Router 2 (6TB) - € 539 - isla routerka Xiaomi ee ku jira nooca 6TB, ee loogu talagalay kuwa ugu baahida badan iyo kuwa doonaya inay martigeliyaan dhammaan fiidiyowyadooda, filimadooda, sawiradooda, nuqullada nuqul iyo kuwa kale ee router-kan.
# Fiiro gaar ah: Dhamaan router-yada Xiaomi waxay leeyihiin softiweer ku saleysan OpenWRT, Nooc Linux ah oo loogu talagalay router. Waxaa jira barnaamij la yiraahdo My Wifi AppStore iyo Google Play oo loo adeegsado in lagu kala sooco taleefankeena casriga ah ama kan kiniiniga ah isla markaana lagu heli karo Ingiriis (loogu talagalay Android waxaa jira nooc Isbaanish ah oo ay tarjumeen bulshada ku jirta golaha MIUI), websaydhada websaydhada ayaa laga heli karaa oo keliya Shiineys In kasta oo ay taasi jirto, haddii aan ka helno biraawsarka Google Chrome waxaan u turjumi karnaa Isbaanish dhammaystiran.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Super Guide si aad u fahamto iskuxirkaaga Wi-Fi oo aad ugu dhigto heerka iPhone-kaaga, Mac iyo aaladaha kale.
maqaal aad u wanaagsan oo macluumaad iyo tayo leh, laakiin su'aal ayaa ka dhalanaysa: qalabka Aaladda IOS, waxaan awood u helay oo keliya inaan ogaado xawaaraha isku xirka Wi-Fi-ga, oo leh codsi hawleedka loogu talagalay router-yada Apple. Ma jirtaa waddo kasta oo lagu ogaan karo xawaaraha isku-xirka Wi-Fi, oo leh router-yada aan haysan codsi gaar ah? Mahad badan.
Ku jawaab Emi
Waxaan ka baqayaa in waxa kaliya ee aad sameyn kartaa ay tahay inaad internetka ka raadsato moodeelka routerka aad rabto inaad wax ka ogaato, mararka qaar wuxuu ku soo baxayaa qaabeynta shabakadda, laakiin mararka qaarkood maahan, xaaladahaasna ma jirto hab lagu ogaan karo hubaal ka kalsooni badan tahay raadinta websaydhka soo-saaraha ama kuwa kale ee bixiya macluumaad ku saabsan aaladda ... Sababtoo ah waxaan fahamsanahay inaad ula jeeddo inaad ogaato heerka uu adeegsanayo.
mahadsanid, Uma jeedo heerka, tan iyo markii aan ogahay in router-ka iyo iphone-keygaba ay yihiin a. C., oo waxaan ku xirayaa shanta gaherttz band. Maxaa dhacaya ayaa ah ka hor intaanan isticmaalin AirPort xad dhaaf ah, oo aan u maro barnaamijka AirPort waxaan arki karay dhammaan xiriirada Wi-Fi ee router-ka, iyo xawaaraha meetiyada meg halkii ilbiriqsi Xaqiiqdu waxay tahay in jazztel uu i siiyay router cusub, laga bilaabo heerka 802.11 ilaa C laakiin ma haysto wado aan ku xaqiijiyo xawaaraha isku xidhka Wi-Fi ee u dhexeeya iPhone-ka iyo router-ka, markaa waxaan ku waydiinayay ma ogtahay wax codsi ah oo ii sheegaya xawaaraha isku xidhka router iyo iPhone . mahad badan.
Ku jawaab em
Waxaan dhihi karaa nacas, laakiin ... miyaadan isku xiri karin Madaarka xad dhaafka ah kadib router Jazztel? Tani waxay ku siin kartaa adeegyadii aad ku laheyd AirPort, sax? Xitaa waad ku xiri kartaa AirPort meel kale oo guriga ka fog halkaas oo fiilo ay imaan laheyd sidaasna ay ku kordhineyso xadiga Wi-Fi guriga dhexdiisa, sax?
Dabcan, ma aqaano in router uu "ceejin doono" mid kale oo annaguna waan doqon doonnaa.
wanaagsan, AirPort-ka oo aanan hadda haysan, taasi waxay noqon kartaa xalka si kastaba ha ahaatee sidaas oo kale waligeyna ma awoodo inaan cabbiro xawaaraha dhabta ah ee iskuxirahayga Wi-Fi. Waa inaan ku xiraa kumbuyuutar Windows ah router-ka si ay ii siiso xawaaraha dhabta ah ee isku xirka Wi-Fi-ga.
Saaxiib xun, maqaal wanaagsan.
Ku soo jawaab SerraCop
Aad baad u mahadsan tahay 😉 Waxaan rajeynayaa inay kuu adeegtay!
Dabcan, ma aqaano in hal router uu mid kale "dhuujinayo" oo annaguna aan doqon ka noqon doonno.
Waad ku mahadsantahay maqaalkan. Dhameystiran oo aad u cad. Salaan
Jawaab ku bixi DanielCip
Muxuu yahay maqaal wanaagsan sidoo kale dhaleeceynaya wax ka badan hal maqaal oo ku yaal boggan, way fiicantahay in la yiraahdo markay weyn yihiin. Waan kugu hambalyeynayaa walaal shaqo weyn. Salaan
Dib u eegis aad u fiican oo mawduuca ah. Waa inaad ku daabacdaa joornaal saameyn weyn leh maadaama ay runtii aad u dhameystiran tahay. Salaan iga timid Mexico.
Wanaagsan, maqaal noocaas oo kale ah ayaa seegay degelkan
Diego Villa dijo
Mawduuc umuuqda mid murugsan, waxaad kufasiraysa tufaax waana cadahay, mahadsanid, maqaal wanaagsan
Jawaab Diego Villa
Maqaal aad u fiican. Aad baad ugu mahadsantahay waqtigaaga iyo wadaagistiisa.
Jawaab Sergio Cruz 
Ugu dambayn qof baa si fudud u sharxaya wax murugsan laakiin qallafsan iyo qoto dheer. Waxaad iga saartay shaki badan. Waxaad tahay macalin. Hambalyo.
Apple wuxuu ku talaabsadaa horumar weyn xagga A9X
Sida loo hagaajiyo "Dib u Deji Lama Tilmaami Karo" App Store